Cubot KingKong 5 Pro rutere n'ahịa Spanish maka euro 121,62 | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | China gam akporo, Mobiles
Ọ bụrụ na ị na-eche ohere iji nweta ekwentị mkpanaaka na gam akporo 11 na nnukwu batrị, ị nwere ike ịga inweta Cubot KingKong 5 Pro maka € 121,62 na onyinye pụrụ iche igba egbe.
Ekwentị mkpanaka na-emegharị emegharị iji guzogide ọnọdụ kachasị njọ na nke ụbọchị ole na ole, kpọmkwem ruo Eprel 2, ị nwere ike nweta ya ka ọ belata 44% na ọnụahịa. A ahia maka a ngwaọrụ na-akpa àgwà n'ụzọ zuru okè na nwere na gam akporo 11 na nke na-enwe ndị kasị mma gam akporo atụmatụ.
1 Ihe mbụ eji eme ihe niile nwere ọnụ ala Android 11
2 Nkọwapụta teknụzụ gị
3 3 ụbọchị na-enye na 44%
Ihe mbụ eji eme ihe niile nwere ọnụ ala Android 11
Nke a Cubot KingKong 5 Pro, na nke anyi buru uzo gwa gi banyere ya n'oge di anya gara aga, enwere ike ikwuputa ya dika mbụ akpa dị larịị dị ọnụ ala na gam akporo 11 Ma ọ bụ na ndị € 121,62 bụ ọnwụnwa nke ọ na-esiri ike ịsị mba, na karịa mgbe anyị matara nkọwa ya ndị ọzọ.
Anyị na-ekwu maka otu n'ime ekwentị mkpanaaka ndị a sitere na Asia nke na-enweghị atụmatụ na nke na-eju anyị anya site na otu esi emezu ya. Anyị nwere batrị sara mbara nke ruru batrị 8.000mAh, igwe okwu stereo abụọ maka ụda kachasị mma, IP68 & IP69K iguzogide mmiri na ájá, na kombo okpukpu atọ iji nweta foto dị ka otu n'ime amaokwu ya.
N'ezie, anyị na-eche ihu igwe nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eguzogide ọgwụ, ya mere ya imewe aga aka na-enwe ike ihu ndị na oghere na gburugburu ebe anyi choro ihe ndi kwesiri nke ha.
Nkọwapụta teknụzụ gị
Dị ka anyị kwuru, na Cubot KingKong 5 Pro nwere batrị 8.000mAh, igwe okwu stereo abuo, IP 68 na IP69K maka nguzogide na igwefoto okpukpu ato dika ihe ndi bu isi, ma enwere otutu ihe ndi ozo nke anyi na-aghaghi ileghara anya.
Banyere esịtidem ebe nchekwa na RAM, na Cubot KingKong 5 Pro ruru 64GB maka nke mbụ na 4GB maka nke abụọ. Ihuenyo nke ekwentị a ruru 6 sentimita asatọ na mkpebi HD (ka anyị ghara ịtụ anya mkpebi dị elu ebe a na ebe ọzọ enwere ọnụahịa ahụ ...) na igwefoto maka n'ihu ihuenyo ahụ na-anọ na 25MP maka oghere nke na-elekọta selfies na oku vidiyo.
Ihe ọzọ dị mkpa nke ekwentị ọhụrụ Cubot malitere taa, bụ igwefoto ya na atọ 48MP isi anya, 5Mp maka nnukwu oghere, na otu 0,3MP dị ka lensens photosensitive.
Anyị nwekwara ike depụta njirimara ndị ọzọ na-adịghị mkpa, mana nke ahụ na-agbakwunye na ezigbo ndepụta ha, dịka ha bụ NFC, GPS, GLONASS, BEIDU na gam akporo 11 (Ọ bụ ezie na nke a na-amasị anyị ọtụtụ). Ọ nwere ọdụ ụgbọ USB-C, ikike ịgbatị ebe nchekwa dị n'ime ya na micro-SD nke ruru 256GB, OTG, ID ID na Bluetooth 5.0.
Yabụ n'ozuzu ya na ọnụahịa a na-enye n'oge a, ọ bụ nanị ndị kasị mma rugged mobile na a ala price na ị pụrụ inweta taa.
3 ụbọchị na-enye na 44%
Emebere Cubot KingKong 5 Pro taa ma tinye ya na mbelata nke 44%, ya mere ị nwere ike ịzụta ya maka ọnụahịa pụrụ iche nke € 121,62, yabụ ọ bụrụ na ịchekwala iji chere maka mwepụta nke ekwentị nke ụdị a, ma eleghị anya ọ bụ oge na ị ga-aga onyinye ha pụrụ iche na Aliexpress.
Cubot KingKong 5 Pro onyinye pụrụ iche - Njikọ ya € 121,62
Ọnụahịa a dị site n'otu ụbọchị taa rue Eprel 2, mgbe ahụ ọ ga-alaghachi na ọnụego ya ọ ga - adịgide na euro 217,19 nakwa na ọ dịghị njọ ma ọlị n'ịgụ nkọwa ya na nzube ya bụ isi; na na ọ bụghị onye ọzọ karịa iguzogide ma anyị nwere ike iburu Cubot n'ugwu, osimiri ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ n'atụghị ụjọ na ọ nwere ike ịda ma gbapụ na ikike ya maka ụbọchị 2 nke batrị na mpaghara ahụ.
A mobile nke Anyị nwere ike ịta ụta na ọ nweghị ụdị agba dị iche iche, ma ọ bụghị na ọ na-aghọ nhọrọ pụrụ iche maka onye ọ bụla na-enwe mmasị ịme egwuregwu dị egwu, ọrụ ya na-akpali na gburugburu ebe mgbagwoju anya ma ọ bụ na ọ chọrọ ịnweta mkpanaka nke abụọ ọ bụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Cubot KingKong 5 Pro malitere na ụbọchị 3 nke enye na 44% maka € 121,62